Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Dhiibidda Halgame C/kariim (Qalbi dhagax) waxay muujinaysaa inay jirto Qaran wareejin hoose oyna Soomaalidu ogayn!! By: Xaaji M/Rashiid.
Maqaal: Dhiibidda Halgame C/kariim (Qalbi dhagax) waxay muujinaysaa inay jirto Qaran wareejin hoose oyna Soomaalidu ogayn!! By: Xaaji M/Rashiid.
Posted by Daljir	/ September 7, 2017
Halgamayaal marka hore waxaan idinla wadaagayaa murugada aad wada dareemaysaan hadaad tihiin guud ahaan umadda soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Somalida Ogadenya ee xorriyadda jecel. Marka labaad waxa iigu adkaa een kala kulmo qoraalkan wuxuu ahaa Cinwaan u sameynta. Sidaad ogtihiin haduu ciwaanka qoraalku kaa xumaado kaama soconayo. Waxaan ku sigtay inaan sameeyo ciwaan aflagaaddo xambaarsan, kadibna waxaan xasuustay inayna taasi kamid ahayn nidaamka halganka ONLF iyo taageerayaasha oo ah mid ka taxadara inay soomaaliwayn ku jeediyaan Adinkooda iyo Afkooda, mana dhici karto in shaqsiyaad qaldamay loo aflagaadeeyo umadda soomaaliyeed oo dhan.
Halgamayaal waxay saxaafadda caalamka iyo gaar ahaan midda soomaalidu siwayn u hadal haysaa xaajadii ugubka ahayd ee ka dhacday caasimadda soomaaliya ee Xamar. Xaajadaasi waa midda kusaabsan Naftiihuraha loo loogay Cadowgii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa, waana dhacdo ay xaqiijiyeen shaqsiyaadkii sida hoose ula socday xaaladda, inkasta oo eedaysanayaalkii afkoodii juuqda gabay kadib markay kusoo fataheen mawjado mudaaharaadyo iyo saxaafad isugu jira kuwaas oo xambaarsanaa qiiro wadaniyadeed iyo mid Soomaalinimo. Intii ay kuraasida dalka ku fadhiyeen Farmaajo iyo kooxdiisu waxaa laga dheefay maaweelin been ah iyo afmiishaarnimo, waxayna kusoo khatimeen warkoodii inay ka oohiyaan Dumarka soomaaliyeed, Caruurahana agoonteeyaan!!
Halgamaaga loo afduubay kootali Gebre iyo waxa kasii liita wuxuu ahaa Nin dhiigiisa u huray difaacidda dalkda iyo dadka soomaaliyeed waana arrin ayna tiiraanyadeedu hadhi doonin kuwo iibsadayna waxaa kuoo furmay Albaabadii hoogga iyo halaagga Aakhiro iyo Aduumba. Maxbuusku wuu guulaystay mar haduu guumaysatada Itoobiya kula dagaalmayay Ogadenya in kabadan 17 sano oo xidhiidh ah, waxaana cadaatay inuu guumaystuhu tabar u waayeen qabashadiisa. Si kastaba ha ahaatee dhacdadan xanuunka badan waxaa lagu fasiri karaa oo kaliya inay iibsadeen dad saantiisa leh oo umadda u dhuuntay, balse waqtigan iyagu banaanka isa soo dhigay oo far waawayn ku qoray cidda ay u shaqeeyaan!
Madaxda kusheega dalka soomaalia ee fidno wadayaasha ah ee ku kacay falka gurracan waa inay soomaalidu si deg deg ah uga tashato oo ay kuraasida dalka katuuraan, taas hadii la helo waa guul taariikhi ah. Faa’iidada laga dhaxlayo waxay noqon kartaa inayna madaxda soomaaliyeed ku dhiiranin cadow u garbo,duubista wadani soomaaliyeed oo dambe! waa su’aale ma dhici kartaa inayba madaxbanaanidii dalka soomaalia si hoose u wareejiyeen, isla markaana ay tahay arrin shacabka laga qarinayo? markii si dhab ah loogu kuur galo dhuqdhuqdooda ay Adis Ababa u kala dhuumanayaan waxay u muuqataa in laga dhigtay
Badhisaabyo Itoobiya, waana sida ay muujinayso tilaabadan ay ku dhiibeen Muwaadinka!
Halganka Ururwaynaha ONLF hormuudka uyahay ee lagu raadinayo aayo katashiga soomaalida Ogadenya kuma joogsanayo Nin dhintay, nin la dhiibay iyo nin caajisay toona, hadafkuna wuu ka shishiiyaa intaas oo dhan. Yoolka halganku sida aan ka war hayo waa inay dalka iyo dadkiisu kabaxaan noloshan silica ah ee ay ku jiraan una noolaadaan sida caalamka intiisa kale! Shacabka somalida Ogadenya ee u guntaday inay soo dhacsadaan xuquuqdooda waxaa la gudboon inay falkaas kaga jawaabaan dardar cusub, wayna arkaan inay TPLF wajahayso duruufo adag oo siyaasadeed kuwaas oo u muuqda inay la degi doonaan!
Waxaan si kal iyo laab ah u bogaadinayaa shacabwaynaha jamhuriyadda soomaaliya ee sida wayn uga dhiidhiyay falka fulaynimada ah ee ay qaadeen Farmaajo Fidno iyo Khayrlaawe. Walaalayaal hadaad tihiin bulshada qeybaheeda kala duwan, sida Culimada, Aqoonyahanka, Baarlamaanka, Saxaafadda iyo dadka kale ee caadiga ah, Runtii waxaad dhigteen wacdaro ayna filaynin kuwa Xamar u badalay Seylad Dadka lagu kala iibsado! waa muhiim inaad kacdoonka sii xoojisaan hadii kale waxaa idinku fulaysa xikmadii ahayd (Ninkii qeyrkii loo xiirayow adiguna soo qoyso!). Ugu dambayn waxaan si kulul u dhaleecaynayaa dhiibista Mr C/kariim sh Muuse ee afka loo galiyay Yaxaasyada Woyaanaha.
Isku soo wada duuboo, waxaan kusoo koobayaa qoraalkan- Baadilka iyo ehelkiisu way suuli doonaan, Xaqa iyo ehelkiisuna way guulaysan doonaan idan ilaahay!